Fiidiyowga Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah
Fiidiyowgu wuxuu ku jiraa subtitles Isbaanish, Soomaali, Oromo, Jarmal, Faransiis, Carabi, Shiinees, Amharic, iyo Laotian. Helaan subtitles adiga oo garaacaya badhanka "CC" ee dhinaca geeska midigta ee cayaaraha fiidiyowga. Fiiri fiidiyowga leh subtitles gudaha Hmong, Dakota, iyo Ojibwe adoo gujinaya xiriirka udhaxeeya.
Iyada oo qayb ka ah sii deynta our Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah 2019-2021, waxaan bixinnaa muuqaalkan muuqaalka ah. Hoos waxaa ku qoran qoraalka.
Jiil kasta wuxuu wajahayaa waqtiyo u baahan baahi weyn iyo qadarin. Waxaan ku noolnahay waqtigaan.
Waa wakhti aad ku ilaalinayso khayraadkeena dabiiciga ah iyo inaan ka shaqeyno sinaanshaha jinsiyadda, waqti aad u macquul ah iyo si niyadsami leh. Waxtarka leh maxaa yeelay taariikhda ayaa na tusinaysa awoodda dadka la wadaagaya xallinta si ay u sameeyaan isbedel fiican.
Machadka McKnight wuxuu umuuqdaa duni aqoonsan sharafta qof kasta, oo aan u dabaaldego hal-abuurka farshaxanka iyo cilmiga sayniska, isla markaasna isu yimaada si aan u ilaalino midkeenna iyo dhulka kaliya.
William iyo Maude McKnight oo ay aasaaseen 1953-kii, waxayna qaadeen gabadhooda kaliya, Virginia McKnight Binger, iyo carruurteeda, iyo carruurta ay dhaleen, waxaan nahay saldhig qoys oo ku saleysan Minnesota. Maanta, waxaan ka shaqeynaa habab badan, qaybo, iyo xuduudaha juqraafi.
Hadafkayaga: Horumar mustaqbal xaq ah, hal abuur leh, iyo mustaqbal ballaaran oo ay dadku iyo meeraha ku koraan.
Qiyamkayaga: Maamulidda, sinnaanta, ixtiraamka iyo xiisaha.
Waxaan qaadannaa habka la qabsashada iyo habka casriga ah, waxaanan u adeegsanaa dhammaan kaalimahayaga iyo kheyraadkeena si aan u xaqiijinno howlahayaga. Xaaladdayada guri ee Minnesota - iyo hareeraha adduunka - barnaamijyadayada kala duwan waxay ku mideysan yihiin dadaal lagu wanaajinayo qaddarinta aan wadaagno.
Qorshaha cusub ee qorshaha cusub ee MCKNIGHT
Machadka McKnight wuxuu jecel yahay inuu muujiyo mahadnaqa dhammaan kuwa ku biiray soo saarida fiidiyowgaan, oo ay ka mid yihiin ururo badan iyo xubno bulshada ka tirsan oo aan ka wada shaqeyno si loo abuuro meer ka badan, hal abuur leh, iyo dhul ballaadhan.
Heerarka Wax soo-saar Video
Jonathan Miller, Tifaftiraha Associate
Sawirada iyo Sawirrada Amaahda
Damir Boosjak ku qoran
Kooxda Northside Funders Group, Bruce Silcox
Shirkadda Dance Ragmala
Waaxda Beeraha ee Maraykanka - Flickr